China Pet Dog Toys6Pack Gift Set Dog Rope Toy Set Dog Puppy Chew Toys Set ထုတ်လုပ်သူ |J&E
Pet Dog Toys6Pack Gift Set Dog Rope Toy Set ခွေး Puppy Chew Toys Set
အနှစ်ချုပ် အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အမျိုးအစား- အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကစားစရာ အရုပ်အမျိုးအစား- ဝါးကစားစရာ ပစ္စည်း- Plush+...
ပလပ်စတစ် + ချည်ကြိုး
အရေအတွက် (အပိုင်း) ၁ – ၅၀ > ၅၀
အရှေ့။အချိန်(ရက်) 15 ညှိနှိုင်းရန်
ရက် 30 ခန့်
Ningbo သို့မဟုတ် Shanghai
ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိနမူနာများကို တစ်ကြိမ်တည်း အခမဲ့ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
♦ဟုတ်ကဲ့ 1 ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
2. မင်း Amazon မှာ ရောင်းခဲ့တာလား။
♦ ဟုတ်ကဲ့၊ FBA ဂိုဒေါင်ကို ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
4.ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပက်ကေ့ခ်ျကိုဒီဇိုင်းဆွဲလိုပါသည်၊ ok ?
♦ သေချာပါတယ်၊ လက်ဆောင်သေတ္တာ၊ ကတ်ပြား၊ PP အိတ် ဒါမှမဟုတ် သင်ကြိုက်တဲ့ တခြားပစ္စည်းလား။
♦ သင်လိုအပ်သော ပိုးသား၊
6. ဘယ်လက်နှင့် ညာလက်ကို ရောနှောရန် သို့မဟုတ် မော်ဒယ်များစွာကို ရောနှောလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။
7. set တစ်ခုအတွက် မော်ဒယ်များစွာကို ရောစပ်နိုင်ပါသလား။
♦ ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်မော်ဒယ်တွေ ရောစပ်ရတာ ကြိုက်လဲ။
ယခင်- လင်းလင်း ကာတွန်း ချည်ကြိုး အံသွား ကိုက်လေလေ ပေါက်နေသော ခရစ္စမတ် ခွေးရုပ်
နောက်တစ်ခု: Pet Drinking Bowl Pet Automatic Water Dispenser အလိုအလျောက် အိမ်မွေးခွေးရေ
ပြင်ပအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဘောလုံး ဝါးကစားစရာ သွားသန့်ရှင်းရေးဘောလုံး
Spiral S ဖြင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောကြောင်ရုပ် ကြောင် Plush အရုပ်
ဒီဇိုင်းသစ် အရိုးပုံသဏ္ဍာန် သွားသန့်ရှင်းရေး tpr အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရုပ်
အိမ်မွေးခွေးများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Pup နှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်ဒီဇိုင်းအသစ် ချည်ခွေးကြိုးအရုပ်များ...